कटवाल लाई हटाउने अन्तिम तयारी, देश पुन मुठभेडमा जाने संकेत – नेपाल डायरी डट कम
अप्रील 26, 2009 अप्रील 26, 2009 by nepaldiary
कटवाल लाई हटाउने अन्तिम तयारी, देश पुन मुठभेडमा जाने संकेत
राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय जगतमा नेपालको सेनापति पकरणको चासो बधाएको मात्र होइन,एक प्रकारको ध्रुबिकरन नै ल्याएको छ । बिषेश गरी यो बिषयले अब भारत,चाइना, र सक्तिसालि अमेरीका को कुटनितिनिक बृत र पत्रपतृका मा समेत ब्यापक ठाउ पाएको छ । एमाले बैठक ले कुनै ठोस निर्णय गर्न नसके पनि र अर्को सत्ता साझेदार दल मदेशी जन-अधिकार फोरम लगायत अन्य दल हरुले सहमति नजनाए पनी नागरीक सर्बोच्चाता कायम राख्न भन्दै माओबादी ले जसरी भए पानी कटवाल लाइ हटाउने णिर्णयमा माओबादि पुगेको हो । एमाले निर्णय पर्खेर बसेको माओबादि एमाले बैठका बाट आफु अनुकुल निर्णय नआउने ठनेरै होला, अरुले सहयोग नगरे पनि कटवाल लाइ हटाउने निर्णय मा माओबादि पुगेको हुन सक्छ । एमाले को ढुलमुले निति बात माओबादि पनि अनबिज्ञ छैन ।
यसै बिच एमाले को आजको बऐठकले पनि कुनै ठोस् निर्णय गर्ने सकेन । स्थाइ कमिटिमा तिब्र बिबाद भएपछी एमाले कुनै निर्णय गर्ने नसकेको हो । यता प्रधानमन्त्रीले आज राष्ट्रपती रामबरण यादबलाई भेटेर कटवाल लाई हटाएर छड्ने बाताएका छन ।
एमाले मा चर्को मतभेद
सत्ता साझेदार एमाले भने यस् बिषयमा कुनै ठोस् निर्णय आज पनि गर्न सकेन, कारण खड्ग ओली, माधव नेपाल पक्ष ले कटवाल को पक्षमा गरेको लबिङ । एमाले ले पनि सेनापती हटाए सैनिक कु हुने संकेत पाइसके को छ । बामदेव गौतमले त अझ हिजो ललितपुरमा सैनिक कु हुनसक्ने कुरालाई स्विकारदै आफु प्रधानमन्त्री भएको भएको भए उहिल्यै कटवाल लाई हटाउथे सम्म भने । केही दिन अगाडी कटवाल लाई हटाउथे सम्मा भने । केही दिन अगाडि खड्ग ओली ले पत्रकार सम्मेलन गरी सेनापती लाई हटाउन नहुने भनेपछी बामदेव गौतम ले उन लाई सडक छाप नेताको संज्ञा नै दिएका थिए । यता कारबाही गरीए सेनाले कु गर्ने सक्ने भए पछी एमाले अझ ससंकित भएको छ । सरकार (माओबादी ) कारबाही नगरी नछाड्ने मनस्थिती मा पुगे पछी सेनाको पक्ष लिदा भोली सैनिक शासनको दोस आफ्नो पनि टाउको मा आउने भएको ले एमाले ढुलमुल- ढुलमुल गरिरहिको छ ।
के सन्देश ल्याए त सुद ले ?
सुदले ल्याएको स्पस्ट सन्देश के हो भने भारत सेनापती लाई हटाउने कुरामा सहमत छैन । यदी भारतिय सहमती बेगर कटवाल लाई हटाइन्छ भने -सेनाको राष्ट्रिपती लाई अगाडि ल्याएर गरेने कु को भारत ले समर्थन गर्ने छ । किन भने यो मामलामा नेपाल र भारत मात्रा नभै चाइनाको समेत यस प्रकारअण मा सकृय चासो छ, जुन कुरा भारत लाई मन परेको छैन । भारतको बुझाईमा यो मामालामा चाइनाले सरकार लाई ग्रीन सिङ्नल दिएको छ , अशोक मेहता ले हिजो बि बि सि नेपाली सेवा लाई दिएको अन्तरबार्ता ले पनि यो कुरा स्पस्ट हुन्छ । आज संबभत सुद ले प्रचन्ड लाई भेटेर उक्त सन्देश दिइसकेका छन ।
के गर्ला त माओवादी ?
माओवादी सचिबालयको अनौपचारिक बैठक ले अरु पार्टी ले साथ नदिए पनि कटवाल लाई हटएरै छोड्ने , अरु सरकार छोड्न परे पनि छोड्ने निर्णयमा पुगेको छ । माओवादीले समेत कटवाल हटाउदा हुन सक्ने कु को ’boutमा जानकारी पाइसकेको छ । श्रोत का अनुसार सैनिक कु हुन सक्ने जानकारी माओवादीले स्पष्टिकरण पठाइकै दिने पाएको हो । स्पस्टिकरण पठाएको दिन माओवादी को बैठकमा सैनिक कु भए प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन क्यान्टोनमेन्ट मा रहेका आफ्ना जन-सेनालाई समेत सैनिक कु को प्रतिकार गर्न का लागी तयार रहन हेडक्वाटरको आदेश गइसकोको थियो । हतियार को साचो र सुरक्षा को लागि कमान्डर हरुलाई अलर्ट राखेको थियो ।
प्रचन्ड लाई कटवाल प्रकारण भालुको कन्पट भएको छ । जतिसक्दो चाडो प्रचन्ड कटवाल लाई हटाउन चाहन्छन । स्पष्टिकरण मामालमा एक मत भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचन्ड चेपुवामा परेका छन । नन्द किसोर पुन, बादल आदिले सेनापती नहटाए पार्टिले सरकार छोडेर जनबिद्रोहमा उतर्नु पर्ने द्डान राखे पछी प्रचन्ड ले जसरी भए पनि कारबाही गर्ने त बाताए, तर राष्ट्रीय राजनीति आफु अनुकुल नदेखे पछी र सत्ता साझेदार एमाले पनि धर्मराए पछी प्रचन्ड एक कदम पछाडि सरेका हुन । यो निर्णय प्रचन्ड का लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । पार्टी टुक्रिन सक्ने र आफ्नै सेनाले समेत दिद्रोह गर्न सक्ने देखे पछी प्रचन्ड ले आजको सचिवालय बैठक बाट सेनापती हटाउने निर्णय गरेका हुन ।
के होला अब ?
भोली सम्ममा यो प्रकारणले एउटा मोड ली सक्नेछ । माओवादी श्रोत का अनुसार सरकार को निर्णय नमानेको कारन देखाउदै सरकारले सेमापती लाई हटाएको सुचना पठाउने छ । र सभबत सेमा र जनसेना पुन एकपटक आम्ने-साम्ने हुनेछन । सैनिक कु भएको खन्ड मा पनि त्यस्को प्रतिकार कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा माओबादी पनि आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ ।
Posted in नागरीक,नेपाल डायरीTagged crisis,katawal,Nepal
अघिल्लो एमाले पार्टि होइन क्लब हुँदैछ ।
अर्को के कारबाही होला त कटवाल लाई ?